China High okpomọkụ USB Manufacturer - Ogo High okpomọkụ USB kwuru - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > USB > Igwe okpomọkụ dị elu
anyị na-enye eriri USB AFRPF dị elu withUL TUV SGS asambodo. anyị raara onwe anyị nye cable na waya rụpụta ọtụtụ afọ, ekpuchi ọtụtụ nke Europe na America ahịa. Anyị na-atụ anya na-abụ gị ogologo okwu onye na china.AFRPF USB 1. Product Okwu Mmalite nke AFRPF USB AFRPF gwara mmanụ ...
anyị na-enye AFRP eriri elu mma withUL TUV SGS asambodo. anyị raara onwe anyị nye cable na waya rụpụta ọtụtụ afọ, ekpuchi ọtụtụ nke Europe na America ahịa. Anyị na-atụ anya na ị ga - abụ onye gị na gị ga - ebi ogologo oge na china.
anyị na-enye FEP USB elu mma withUL TUV SGS asambodo. anyị raara onwe anyị nye cable na waya rụpụta ọtụtụ afọ, ekpuchi ọtụtụ nke Europe na America ahịa. Anyị na-atụ anya na-abụ gị ogologo okwu onye na china.FEP USB 1. Product Okwu Mmalite nke FEP USB FEP gwara mmanụ bụ exce ......
anyị na-enye PFA USB elu mma withUL TUV SGS asambodo. anyị raara onwe anyị nye cable na waya rụpụta ọtụtụ afọ, ekpuchi ọtụtụ nke Europe na America ahịa. Anyị na-atụ anya na ị ga-abụ onye gị na gị ga-ebi na china.PFA cable 1. Product Okwu Mmalite nke PFA cable PFA gwara mmanụ bụ exce ......
Anyị na-enye eriri AFR dị elu yana UL TUV SGS asambodo. Anyị raara onwe anyị nye eriri na waya rụpụta ọtụtụ afọ, na-ekpuchi ọtụtụ Europe na ahịa America. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi ogologo oge na china.
Anyị na-enye PTFE PFA FEP eriri elu mma na UL TUV SGS asambodo. Anyị raara onwe anyị nye eriri na waya rụpụta ọtụtụ afọ, na-ekpuchi ọtụtụ Europe na ahịa America. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi ogologo oge na china.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Igwe okpomọkụ dị elu na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Igwe okpomọkụ dị elu dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.